Isamsung isothuse eCES ngeemveliso zayo ngeGoogle TV | I-Androidsis
Isamsung isothusile kwi-CES esandula ukugqitywa kwaye khange ichaneke ngenxa yokubonisa ithebhulethi entsha njengabo bonke abavelisi abaphambili. Endaweni yoko, samangaliswa zizixhobo ezibini eziya kuthi zifike kwiimarike kwisithathu sokuqala salo nyaka kwaye zibandakanya iGoogle TV.
Ngelixa sele ikho Besizazi iinjongo ngokubhekisele ekufakweni kweli qonga litsha likaGoogle kwiimveliso zabo, Sonke besicinga ukuba iya kuba koomabonakude apho siza kubona khona inkqubo yokusebenza yefashoni isebenza hayi kwi Umdlali weBlu-Ray 3D okanye i-deco ethile yalo mabonwakude kwisitayile esinyulu se Ukuhlaziywa kweLogitech, com ekugqibeleni ube.
Zombini ezi zixhobo ziya kuba yinxalenye yosapho olutsha lwee-terminals ze-Samsung eziza kuthiywa ngegama Smart TV. Ukudibanisa iGoogle TV kwiithelevishini zabo abakaqinisekisi ngokusesikweni nantoni na kodwa inokuba kungenxa yokuba uGoogle ufuna ukulungisa ngokupheleleyo kwaye aqalise isizukulwana sesibini seGoogle TV kwaye ufuna onke "amaqabane" akhe alinde kude kube lelo xesha ukubhengeza iimveliso zabo.
Zombini ezi zixhobo zithiwe thaca ngoku azizukusilela kwizixhobo ezifanelekileyo, kwelinye icala ezinye zibalulekile, ukuze zisetyenziswe ngokuchanekileyo kunye nokonwabela ukuntywila. Iibhodi zezitshixo, iimakrofoni kunye nokusetyenziswa ukuze ukwazi ukusebenzisa ii-smartphones ze-Android ziya kufika kunye nezixhobo ezivenkileni.
Sikulindile ngokungakhathali kwaye ngakumbi ukwaziswa kwihlabathi lonke kuhlobo olutsha lweGoogle TV ngokubandakanya iMakethi ye-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Isamsung isothusa kwi-CES kunye neemveliso zayo zeGoogle TV